Karọt iche | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Karọt iche
Carrots "Shantane 2461": nkọwa na ịkọ ihe
Carrots "Shantane 2461" abụwo otu n'ime ụdị ọka ndị kacha mma. Inwe àgwà nke onye ndu, ụdị dịgasị iche iche etinyewo akụkụ niile nke ihe a na-achọpụta: ụtọ na okpukpo, ọdịdị mara mma, mkpụrụ dị elu, ntụgharị dị na ojiji. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na nlekọta ahụ, kọwaa ụdị dị iche iche, uru na ọghọm nke ndị ọbịa France.
Carrots "Samson": nkọwa, ịkụ na nlekọta
N'etiti ụdị carrots ndị na-ewu ewu n'ahịa anụ ụlọ, Samsịn adịghị anya. Ọ dọtara mmasị nke ndị na-elekọta ubi n'ihi ezigbo ụtọ ya na ezigbo mmabebe. K'anyị hụkwuo nkọwa na njirimara nke mgbọrọgwụ.
Karọt "Nantes" - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nna ochie dị afọ 80, bụ onye gosipụtara onwe ya na mpaghara nke mbụ Soviet Union. Ihe dị iche iche nwetara site na ndị na-azụlite Soviet na 40 nke narị afọ gara aga. A kụrụ ụgbọ ala a n'ebe ndịda nke Krasnodar na akwa nke obodo Irkutsk - na ebe ọ bụla ọ na-amasị ndị na-elekọta ubi na-enwe mkpụrụ na-aga n'ihu.
Njirimara bara uru nke carrots
Carrots nke ụdị violet pụrụ iche na-enweta ugbu a na-ewu ewu. Ka anyi gbalịa ichoputa ihe, n'agbanyeghi agba nke mgbọrọgwụ ya, o di iche na iche iche nke carrots, nke nwere uru ma obu ihe ndi ozo adighi nma. Nkọwa Site na echiche nke ihe ọkụkụ, carrots ndị na-acha odo odo nwere otu ụdị ego ahụ dị ka karọt mbụ (Daucus carota subsp.
Elu-mkpụrụ karọt ọtụtụ Vita Ogologo
Onye ọ bụla na-eme ka ha nweta àgwà ha na àgwà nke ihe oriri ahụ: uto dị mkpa nye mmadụ, idebe àgwà dị mkpa nye mmadụ, ọdịdị na ọgaranya dị mma nye onye. Ihe a niile - njirisi ndị ị nwere ike ịnyagharịa site na ịhọrọ ọkwa. Ugbo ala nile di iche iche bu "Amsterdam", "Nantes", "Flaccus", "Shantenay", "Berlikum", "Mini-carrots", "Carrot Parisian" na okpuru kariri.
Queen nke mgbụsị akwụkwọ: atụmatụ nke karọt iche
Taa, anyị ga-eme ka ị mara otu oge dị iche iche a na-akpọ "Queen of autumn". E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche nwere ọtụtụ àgwà dị mma, ma a na-ewere "Queen of Autumn" otu n'ime ihe kasị mma maka ịmalite na ihu igwe na-ekpo ọkụ ma dị mma. Ị ga-amụta otú ị ga-esi agha mkpụrụ nke ọma na ị chọrọ carrots maka ezi ọganihu na mmepe, ma nweekwa ike ọgwụgwụ nke njirimara.
Onye na-ede ihe dị iche iche nke onye na-ede akwụkwọ
Carrots bụ ọkacha mmasị, ewu ewu, na nri ọma. Taa, e nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere karọt Tushon dị iche iche, anyị ga-enye nkọwa ya, ndụmọdụ maka ịgha mkpụrụ na nlekọta, foto nke ihe ga-eto ma ọ bụrụ na agbasoro ndụmọdụ niile. Nkọwapụta na foto "Tushon" bụ oge dị iche iche nke carrots.
Kasị amị mkpụrụ: Canada F1 karọt dịgasị iche iche
Carrots "Canada F1" enweelarịrị n'ọtụtụ atụmatụ onwe onye, ​​n'ihi na, dịka akọwara ya, ụdị dịgasị iche iche na-agwakọta uto dị mma na mkpụrụ ma dị mma maka ọnọdụ igwe na ọnọdụ ala nke mpaghara mpaghara. Ọbụna ndị na-elekọta ubi nwere ahụmahụ dị ukwuu ga-achọta karọt a dị mma na mgbakwunye ndị ọzọ na ubi ha.
Enwere m ike ifriizi zucchini maka oyi n'oge obibi: ezi ntụziaka na elu na eggplants
Kedu esi akụ mkpụrụ vaịn na mmiri
Kedu ihe mere ịnyịnya ji egbu na otu esi egbochi ya
Otu esi elekọta gloxinia n'ụlọ: nchịkwa ọrịa na ịgwọ ọrịa
Mmiri nri nke mkpụrụ vaịn: kacha mma ndụmọdụ
Mixtures nke osisi "Cyclamen Mix": iche iche iche, esi akụ ha ma na-elekọta osisi
Anyị na-eto goslings na incubator